Kwụsị ịkpọ ndị na-ere ahịa umengwụ! | Martech Zone
Tọzdee, Machị 17, 2011 Tọzdee, Ọktoba 27, 2011 Douglas Karr
Izu a, agụrụ m ọkwa ọzọ ebe akpọrọ ndị na-ere ahịa "umengwụ". Ọ mgbe niile yiri ka ụfọdụ ndị na-abụghị ahịa ụlọ ọrụ pundit na akwusila na "umengwụ" akpalite na ọ na-akpatre nwetara m. Onye na-enyefe email nke na-anaghị achịkwa mkpọsa na-akpọ onye ahịa ya umengwụ. Otu onye na-ere ahịa azụmaahịa na-ekwu maka ndị ahịa ha anaghị eji ngwa ha n'ihi na ha dị umengwụ. A na-elekọta mmadụ mgbasa ozi Ihọd-ekwu okwu banyere ahịa bụghị nlekota ma ọ bụ-aza mgbe kwuru online… umengwụ.
Ya mere, for oge maka otu n'ime iyi m.
Bụ onye na-ede blọgụ, ọkà okwu, ma ọ bụ ọbụna onye a na-akpọ "ọkachamara" - ọkachamara n'ihe gbasara isiokwu - dị mfe. Anyị na-agagharị ma na-atụ onye ọ bụla aka na ịgwa ha ihe ha adịghị mma. Ọ bụ ọrụ dị mfe… na ọrụ m hụrụ n'anya n'ezie. Ọ bụrụ n’inwe nghọta dị mma banyere ụlọ ọrụ ahụ, ịnwere ike inyere ọtụtụ ụlọ ọrụ aka na-enweghị igwu ala miri emi. Mana ọ dị mfe ịgwa ndị folks ihe ha na-eme mgbe ha na-enweghị ọrụ ị ga-eme na ịza ajụjụ iji nweta nsonaazụ.
Beingbụ onye ọrụ adịghị mfe. Bụ onye ahịa bụ ihe ịma aka ọbụna karị. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ọrụ na-eme ka onwe ha dị mfe karịa ọtụtụ afọ, anyị agbakwunyela ọwa na ndị na-ajụ ajụjụ na mbadamba ahịa anyị. N'otu oge, ịbụ onye ahịa pụtara ịnwale ad ma ọ bụ abụọ na telivishọn, redio ma ọ bụ n'akwụkwọ akụkọ.
Ọ bụghị ọzọ… anyị nwere ọtụtụ ndị na-elekọta mmadụ na mgbasa ozi naanị - echekwala ahịa ọdịnala na ịntanetị. Heck, anyị nwere asatọ ụzọ nke ahịa naanị na ekwentị mkpanaaka… SMS, MMS, IVR, Email, Ọdịnaya, Ekwentị Mgbasa Ozi, Ngwa Mkpanaka na Bluetooth.
N'otu oge ahụ anyị gbatịrị ọnụ ọgụgụ nke ndị na-ajụ ase, usoro nke nlekota na nyocha ha, yana ụzọ esi bulie ma melite nke ọ bụla… yana ị nweta otu ụzọ iji zụọ nke ọzọ, anyị na-ebelata ihe onwunwe dị n'ime nke ndị na-ere ahịa na-enwekarị n'oge gara aga.
Taa, mụ na ekwentị ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ nke nwere 4 dị iche iche na ebe nrụọrụ weebụ na 4 mba dị iche iche na otu 1… n'onwe ya nọ na ekwentị. Ọ na-atụ anya na-aga n'ihu na-ebuli saịtị ọ bụla regionally na-eto eto ha inbound ahịa - na-enweghị a mmefu ego na-enweghị a sistemụ njikwa ọdịnaya nke na-eme ka njiri mara injin.
Ndị ọkachamara n’isiokwu anaghị enwe nzukọ, ndọrọndọrọ ọfịs, nyocha, nsogbu mmefu ego, ụkọ teknụzụ, ụkọ akụ, usoro njikwa, enweghi akụrụngwa ọzụzụ, yana ndokwa oge iji gbochie ọganiihu ha dịka ahịa. Oge ọzọ ikpebiri ịkpọ onye na-ere ahịa umengwụ, were nkeji ole na ole wee tụlee gburugburu ha… ị ga - enweta ihe ha nwere?
Mụ na ụlọ ọrụ ụfọdụ na-arụ ọrụ ebe ọ chọrọ ọnwa maka ịhazi ọnwa naanị ịme obere edezi isiokwu nke weebụsaịtị… ọnwa! Ọ chọrọ ọtụtụ nzukọ na ọkwa nke ndị njikwa na-agụghị akwụkwọ nke kwesịrị ịtụle ma kwado usoro a. Ihe ụfọdụ ndị na - ere ahịa nwere ike iwepụ abụghị obere ọrụ ebube n’oge a nyere nsogbu na akụnụba.
Zọ ịga Douglas. Otutu ndi mmadu anaghi amuta oke oru nke ndi ahia. Abughi m onye ahia. Ma enwere m ekele maka ọ nwere na ụlọ ọrụ anyị. Isi mkpịsị aka aka gị.
O siri ike ịbụ onye na-ere ahịa.